Wararka | HimiloNetwork
Himilo September 11, 2021	Leave a comment 813 Views
MUQDISHO (HN) — 9-ka bisha September waxay ku asteysan tahay Maalinta Caalamiga ah ee ka Ilaalinta Goobaha Wax-barashada in la weeraro. Maalin lagu dhisay qaraaro loo dhan yahay oo Kal-fadhiga Guud ee QM ayu wadajir u gaareen. Aqoonsashada muhiimadda ay leedahay sare-u-qaadista wacyiga baahida weyn ee loo qabo dhowraarinta goobaha wax-barashada iyo in laga ilaaliyo weerarada, Qaraarka ayaa dhigaya in ...
Himilo September 8, 2021	Leave a comment 85 Views
MUQDISHO (HN) — Maalinta Caalamiga ah ee Aqris-Qoraalka waxaa loo dabaal-degaa September 8 sannad kasta si sare loogu dhigo wacyiga iyo baraarugga dhibaatada jahliga oo wali si weyn uga dhex jira bulshooyinka iyo dunida si guud. Maalintani waxay fursad dib u eegis iyo qiimeyn ahi u tahay sida wax-ku-oolnimada leh ee loo horumarin karo tabaha iyo habaha wax-baridda si mar ...
Himilo September 7, 2021	Leave a comment 101 Views
MUQDISHO (HN) — Haweeneydan iyo ilmaheedu uma soo aadin kaniisadda inay ku dhex cibaadaystaan, waxay usoo baxday inay hubiso arrin qarracan iyo lama filaan ku noqon doonta. Waana inay ka marqaati noqoto seygeeda oo ogaal la’aanteed guursanaya naag labaad. Ugu dambeyntii runta ayay ku indha-qaaday. Waa dhab waa caruus iyo caruusaddii. Waana ninkeeda midka balan kale oo qoran la galaya ...
Himilo September 4, 2021	Leave a comment 149 Views
MUQDISHO (HN) — Ma ahan carruur uu aabbe iyo adeer toona u yahay. Mana ka ahan waardiye goobta ay joogaan. Ugamana sokeeyaan derisnimo. Sidaas oo ay tahay, haddana, Efaliste wuxuu 23-kii sano ee lasoo dhaafay uu noloshiisa u huray barbaarintooda iyo inuu ku koriyo hab dhaqan suuban oo ay kula dhex noolaadaan bulshadooda marka ay weynaadaan. Sannadkii 1998-kii, maalin isaga ...
Himilo September 4, 2021	Leave a comment 72 Views
MUQDISHO (HN) — Waxay yiraahdeen dumarku waxay ka yimaadeen meeraha Venus – raguna meeraha Maaris mana jirto meel sidaas u kala saari karta oo aan ka ahayn xaafadda Ubang oo ah tuulo beesha degan ay lab iyo dhedigta ku wada dhaqan ku kala hadlaan afafkooda gaarka ah. Way adag tahay inaad aaminto in dad meel qura kusoo wada koray ay ...
Himilo September 2, 2021	Leave a comment 170 Views
MUQDISHO (HN) — Darbi-jiifnimadu waa xaalad aanu qofna aamin ka ahayn sida da’yarkan oo 11 jir ah ula soo dersi karta waqti walba. Xattaa Samuel maanu fileyn inuu marnaba noqon doono dibjir ku hoyda buundo hoosteeda ama dharkii uu xirnaa maalintii uu bilaabay la-qabsiga wax ay ka dhigan tahay darbi-jiifnimada uu ku taagnaan doono. Isaga ahaanna, dhulka ayaa u sariir ...
Himilo September 1, 2021	Leave a comment 178 Views
MUQDISHO (HN) — Waxay ka rideen isha midig kana jareen labada ga cmood. Waxaana looga tagay dhimasho. Balse teeda oo aan gelin ayay ku samata-baxday. La kulan Jaklin oo iyada oo 10 jir ah ehelkeeda lagu hor gowracay iyada laga dhigay naafo il iyo addimo go’an. Xasuuqii ka dhacay Rwanda sannadkii 1994 kaliya uma xusuus qaraar. Wuxuu u yahay gugii ...
Himilo August 31, 2021	Leave a comment 135 Views
Himilo August 31, 2021	Leave a comment 99 Views
Himilo August 30, 2021	Leave a comment 71 Views
Laba-wejiilanimada lagu arkay Galbeedka kaddib Xasuuqii New Zealand.
Haweeney uur leh oo ku goodisay inay iska soo xaaqayso cunugeeda haddii aysan helin barteeda Twitter-ka u helin 4,000 likes.